Kedu ihe bụ moraines na olee otu esi akpụ ha na glacier? Network Meteorology
Mgbe anyị na-ekwu maka mbara igwe dị jụụ, anyị na-enyocha ụfọdụ ihe mejupụtara ya nke na-enyere anyị aka ịghọta mgbanwe ya na mgbanwe ya. Dị ka anyị si mara, ugwu glaciers na-emepụta ebe na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ iji chọpụta. Otu n'ime ihe na-guzobere nso glaciers bụ moraine. Ọ bụ a ugwu ugwu nke glacial ihe onwunwe na-adịghị stratified. Edebere Moraines dịka mmekọrịta ha na glacier.
N'isiokwu a, anyị ga-abanye n'ime moraine, ụdị ndị dị ebe ahụ, otu esi akpụpụta ha na ihe bụ mkpa ha nwere maka glaciers.
1 Kedu ihe bụ moraines
3 Ruo mgbe siri ike
Ihe mbu anyi aghaghi ido anya bu ihe moraine bu. Ọ bụ obere ugwu ugwu na-guzobere na a ihe onwunwe na anyị na-akpọ ruo. Nke a bụ ihe ọ bụla karịa ihe e guzobere na glaciers na nke ahụ adịghị edozi. Ihe a adighi n'ime ebe a ogologo oge ma ghara ikwe ka ịdị arọ nke snow na oge gafere. Ọ bụrụ na anyị chee echiche maka etu mmiri ga-esi na-ada ada, anyị ga-ahụ na a na-ekpokọta igwe mmiri kwa afọ mgbe oge udu mmiri gachara. Mgbe snow dara, ọ na-agbakọta n'ihi mmetụta nke ike ndọda ma jiri oyi akwa nke snow dara na nke agbazighi na afọ ndị gara aga.
Nke a bụ otú e si guzobe profaịlụ snowfall. Ka anyị na-erukwu ala, ka afọ ole na ole gasịrị, anyị ga-enyocha A na-akpọ usoro nke snow oyi akwa. Ọfọn, mgbe ihe ndị ọzọ fọdụrụ (yabụ ikwu okwu) mana na-enweghị nsogbu, a na-akpọ ya rue.
E nwere ụdị moraine dị iche iche dabere na mmekọrịta ya na glacier dị. Anyị ga-enyocha ụdị moraine dị iche iche:
Ndabere moraine. Ọ bụ ụdị moraine nke na-akpụ n'okpuru ice nke glacier. Ihe a ga - echi ruo mgbe ọ ga - adị n’elu akwa ga - emetụta agbaze nke ice na mmiri gbazee.
Moraine dị n'akụkụ. Ọ bụ otu ebe a hụrụ ihe ndị ahụ na nsọtụ akwa glacier. N’akụkụ akwa ice ị nwere ike ịhụ akụrụngwa niile mebere moraine a.
Central moraine. Mgbe mkpuru osisi ndị dị n'akụkụ n'akụkụ rịrị oke, ọ nwere ike bụrụ na ha sonyeere ibe ha n'etiti etiti ndagwurugwu ebe glaciers abụọ na-agbakọta. A na-akpọ njikọ a Central moraine.
Njedebe Moraine. Ihe mejupụtara ha bu iberibe ahihia glacier. Ha na-anọkarị na njedebe nke glacier na ọ bụ nsonaazụ nke njem nke ihe ndị a na mmetụta nke ike ndọda.
Moraine nkwụsị. Ha bụ ndị e debere n’elu akwa nke glacier.
A chịkọtara njirimara nke moraines na ọdịnaya nke akpụrụ akpụ nke ice na ihe ndị dịka iberibe okwute ndị a haziri n'ofe dum nke glacier. Akpụrụ ahụ na-adọkpụpụta ihe ala site na ịdị arọ ya na ice na-aga n'ihu na-eme kwa afọ. N'ihi nke a, enyemaka na-agbanwe kemgbe ọtụtụ afọ na afọ ruo mgbe ndagwurugwu glacial na usoro ndị ọzọ guzobere.
Nkume nke moraines ablation na-ewetakwa ọtụtụ ụdị ihe dị iche iche a ga-ahụ na akwa glacier. Ihe ọzọ a na-akpọkwa moraine bụ sedimenti nke glacier na-edozi. Nke a bụ n'ihi na, mgbe njem niile ọ gara site na nnukwu ebe dị elu, glacier na-adọkpụpụta ihe niile achọtara n'ụzọ.
Ruo mgbe siri ike
Ihe anyị na-akpọ ruo oge a bụ ngwakọta nke mmiri na-ebute site na glacier na ike ya. A pụkwara ịkpọ ha ịghagharị ma ọ bụ ịdọrọ glacier mgbe a na-etolite otu dị iche iche dị iche iche na-emepụta na glacier. Ihe rue ugbua bu iberibe uzo nke uzo glacial nke edebere n'uzo.
Njirimara ndị a pụtara na ngwakọta nke oge ahụ abụghị otu. Anyị nwere ike ịchọta ngwakọta nke ụrọ, okwute, ajịrịja na aja. Clayrọ ahụ n'ime osisi ahụ nwere ọdịdị dị okirikiri mgbe ọ na-agagharị ma na-esochi ya. A na-akpọ ha ruo bọọlụ. Bọọlụ ndị a na-agagharị n'akụkụ ihe ndina nke iyi ma nwee ike itinye nkume na ya. Ihe nke a bụ na ọ na-agwụcha ụzọ niile ejiri okwute kpuchie.
A na-akpọkarị bọọlụ ndị a ka ha jiri aka ha rụọ bọọlụ n'ihi na ha nwere ọtụtụ nkume. Ihe niile a na-akpọ ruo oge a na-edebe ya na ngwụcha nke moraine ahụ, n'akụkụ ya, n'etiti ya na ntọala ya. Ka oge gbazee bịara na glacier amalite ịgbaze, ndị mmadụ rue ruo na-adọkpụ ma na-etinye ego na mmiri nke mmiri si glacier. A na-ahụ nke a karị ma ọ bụrụ na ọ bụ glacier kọntinent nke na-amalite agbaze. Tills nwekwara ike ibu ụfọdụ alluvial ego mee nke mineral ma ọ bụ dị oké ọnụ ahịa na nkume. A na-achịkọta ihe ndị a na njem niile nke glacier wee nweta nnukwu akụ na ụba maka ịbụ ihe pụrụ iche. Dịka ọmụmaatụ, ọ na-eme na dayamọnd na Wisconsin, Indiana na Canada.
Ndị ọkachamara na-achọ mineral ndị a na-elekwasị anya na ịgbaso akara nke tills ahụ na-etinye ma jiri ha dị ka njiri mara ịmata ụzọ glacier nwere n'oge ọdịda ugwu ahụ. Otu n'ime ego a na-achọsi ike bụ kimberlite, ndị a bụ nkwụnye ego ebe ị nwere ike ịchọta dayamọnd ma ọ bụ ụdị mineral dị iche iche.
Enwere ọtụtụ ikpe ebe ị ga - ahụta ma ọ bụ gbakwunye ya. Nke a na-eme n'ihi na e liri ha na, ya na omume nke nsogbu nke okpukpu elu ya aghọwo nkume. Nke a na ụdị nkume a maara dị ka tillite na ọ bụ ụdị sedimenti nkume.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu gbasara moraines na tills.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kedu ihe bụ moraines